Senatoro iyo XIldhibaano kulan la qaatay madaxweynaha cusub ee Puntland. – Kalfadhi
Senatoro iyo XIldhibaano kulan la qaatay madaxweynaha cusub ee Puntland.
January 9, 2019 January 9, 2019 Kalfadhi
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa xalay kulan la qaatay madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdulaahi Deni iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Karaash.
Xubnahaan ayaa isugu jira masuuliyiin shalay doorashada kadib gaaray Garowe iyo Xildhibaano maalmahaan oo dhan ku sugnaa Puntland ayaa madaxweynaha kula kulmay hoyga uu ka dagan yahay Garowe, waxa uuna kulankooda u badnaa marxabeyn iyo hambalyeen sida ay Kalfadhi u sheegeyn qaar ka mid ah Xubnihii kulanka ka qeyb galay.
Senator Ayuu Ismaaciil oo ka tirsan xubnaha xalay la kulmay madaxweynaha cusub Saciid Cabdulaahi Deni ayaa Kalfadhi u sheegay in kulanka uu ahaa salaan iyo boogaadin oo kaliya waqti badana aysan la qaadan madaxweynaha.
“Haa waan la kulanay madaxweyne Deni, waxaan ugu hambalyeeynay guusha uu gaaray waa daalnaa waqti badan lama qaadan, waxaana ka koobneen Xildhibaano isugu jira labada Gole iyo wasiiro”. ayuu Kalfadhi u sheegay Senator Ayuu Ismaaciil oo ku sugan Garowe.
Xildhibaan Canab Xasan Cilmi ayaa sidoo kale Kalfadhi u sheegtay in kulan muhiim ah ay la qaatayn Saciid Cabdulaahi Deni oo shalay ku guuleestay doorashadii ka dhacday Puntland, sidoo kalane ay jiri doonaan kulamo kale ay la qaadanayaan madaxweynaha cusub.
“wax gaar ah hada kama wada hadlin madaxweyne Deni balse muhiim ayey aheyd inaa la kulano, waxaa jira kulamo kale oo aan ku balanay si aan uga wadahadalno xaaladda Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya”. Ayey tiri Xildhibaan Canab Xasan Cilmi.
“Sidoo kale waan is aragnay madaxweyne ku xigeenka Axmed Karaash, labadooduba waxay noo muujiyeen siday uga go’antahay isu keenida Soomaaliya”.Ayey markale u sheegtay Kalfadhi Xildhibaan Canab.
Xaaladda magaalada Garowe ayaa saakay degan waxaana dib loo furay isu socodka gaadiidka iyo dadka oo saacadihii la soo dhaafay hakad ku jiray, madaxweynaha cusub ayaa lagu wadaa inuu maanta markale kulamo la qaato Wafdigii shalay ka baxay magaalada Muqdisho ee isugu jira wasiirada iyo Xildhibaanada.